3 “Inzwai! Ndiri kutuma nhume yangu, uye ichavhura* nzira pamberi pangu.+ Uye Ishe wechokwadi wamuri kutsvaga achangoerekana auya kutemberi yake;+ uye nhume yesungano ichauya, iyo nhume yamunofarira. Inzwai! Iye achatouya,” anodaro Jehovha wemauto. 2 “Asi ndiani achatsungirira pazuva raanouya, uye ndiani achamira paachaoneka? Nekuti achange akaita semoto wemunhu anonatsa zvinhu uye sesipo+ yemugezi wenguo. 3 Achagara pasi sezvinoita munhu anonatsa uye anochenesa sirivha,+ ochenesa vanakomana vaRevhi. Achavachenesa sezvinoitwa goridhe nesirivha, uye kuna Jehovha vachava vanhu vanopa mupiro mukururama. 4 Mupiro waJudha neweJerusarema uchafadza* Jehovha sepamazuva ekare kare uye semumakore ekare kare.+ 5 “Ndichauya pedyo nemi kuti ndikutongei, uye handizononoki kupupura ndichipa mhosva varoyi+ nemhombwe, nevaya vanoita mhiko dzenhema,+ nevaya vanobiridzira munhu wemaricho,+ chirikadzi nenherera,+ uye vaya vanoramba kubatsira vatorwa.*+ Vanhu ava havana kunditya,” anodaro Jehovha wemauto. 6 “Nekuti ndini Jehovha; handichinji.*+ Uye imi ndimi vanakomana vaJakobho; hamusati masvika pakupera. 7 Kubvira pamazuva emadzitateguru enyu makatsauka pamirau yangu uye hamuna kuichengeta.+ Dzokai kwandiri, uye ini ndichadzoka kwamuri,”+ anodaro Jehovha wemauto. Asi munoti: “Sei muchiti tidzoke?” 8 “Munhu angabira Mwari here? Asi imi muri kundibira.” Uye munoti: “Takakubirai sei?” “Panyaya yezvegumi nemipiro. 9 Chokwadi makatukwa,* nekuti muri kundibira mese zvenyu. 10 Uyai nezvegumi zvese* mudura,+ kuti mumba mangu muve nezvekudya;+ uye ndapota, ndiedzei panyaya iyi,” anodaro Jehovha wemauto, “muone kana ndisingazokuvhuririi magedhi emvura edenga,+ ndokudururirai chikomborero kusvikira musisina chamunoshayiwa.”+ 11 “Ndichatuka iye anoparadza* uye haazoparadzi zvirimwa zvenyu, uyewo mizambiringa iri muminda yenyu ichabereka,”+ anodaro Jehovha wemauto. 12 “Marudzi ese achati muri vanhu vanofara,+ nekuti nyika yenyu ichava nyika inofadza,” anodaro Jehovha wemauto. 13 “Mashoko amunotaura pamusoro pangu anondirwadza,” anodaro Jehovha. Uye munoti: “Zvii zvatiri kutaurirana zviri kukurwadzai?”+ 14 “Munoti, ‘Kushumira Mwari hakubatsiri.+ Takaita zvaanotirayira uye takafamba takasuruvara pamberi paJehovha wemauto, asi zvakatibatsirei? 15 Kubva iye zvino tichati vanhu vanozvikudza ndivo vanofara. Uyewo vaya vanoita zvakaipa ndivo vanobudirira.+ Havambotyi kuedza Mwari uye hapana chinovawana.’” 16 Panguva iyoyo vaya vanotya Jehovha vakataurirana, mumwe nemumwe neshamwari yake, uye Jehovha akaramba akateerera, achinzwa. Uye bhuku rekuyeuchidza rakanyorwa pamberi pake+ kuitira vaya vanotya Jehovha uye vaya vanofungisisa* nezvezita rake.+ 17 “Vachava vanhu vangu,”+ anodaro Jehovha wemauto, “pazuva randichaita kuti pave nepfuma inokosha.+ Ndichavanzwira tsitsi sezvinoita murume anonzwira tsitsi mwanakomana wake anomuteerera.+ 18 Uye muchaonazve kusiyana kwemunhu akarurama nemunhu akaipa,+ kwemunhu anoshumira Mwari neasingamushumiri.”
^ Kana kuti “ichagadzira.”
^ Kana kuti “uchagutsa.”
^ Kana kuti “vasingaremekedzi kodzero dzevatorwa.”
^ Kana kuti “handina kuchinja.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Muri kundituka.”
^ Kana kuti “chegumi chakakwana.”
^ Zvinoratidza sekuti pari kureva tupukanana twakadai semhashu netumwewo tunobhururuka.
^ Kana kuti “vanofunga.” Dzimwe shanduro dzinoti, “vanokoshesa zita rake.”